အိုင်စီတီမှ checkout စာမျက်နှာတွင် ထည့်သွင်းသော အချက်အလက်များကို ကောက်ယူပါသည်။
ICT.com.mm collect information about you during the checkout process on our store.
ဝယ်ယူသူ site ထဲသို့ ဝင်သည်နှင့် ကြည့်ရှုသည်များမှာ
ဝယ်ယူသူကြည့်ရှုနေသည်များကို မှတ်ထာပြီး ဥပမာ အခုလေးတင်ကြည့်ခဲ့သည်များလို့ခေါ်သည့် recently viewed စာမျက်နှာတွင် ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ကြည့်ရှုသည့်နေရာနှင့် ဝက်ဘရောက်ဇာ အမျိုးအစား အစရှိသည်တို့ကို မှတ်ထာပြီး ဥပမာ ပို့ဆောင်ပေးရန် ကုန်ကျစရိတ် အစရှိသည်တို့ကို တွက်ချက်သည်။
အခြားပို့ဆောင်ရမည့်လိပ်စာကို ထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းသည်လည်း အမှန်ပို့ရန်လိပ်စာအတွက် ကုန်ကျစရိတ် တွက်ချက်နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ ၎င်းနေရာသို့လည်း ပို့ဆောင်ပေးသည်။
ဝယ်ယူသူ ကြည့်ရှုနေစဥ်အတွင်း ကူကီး လို့ ခေါ်သည့် မှတ်သားနိုင်သည့် နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည်။
ဝယ်ယူသည့်အခါတွင်လည်း။ ဝယ်ယူသူ၏ အမည်၊ လိပ်စာ၊ ပို့ရမည့်လိပ်စာ၊ အီးမေလ်၊ ဖုန်း၊ ခရတ်ဒစ်ကဒ်အစရှိသည့် ငွေပေးချေမှု နံံပါတ်များနှင့်အတူ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်လာရင် အချက်အလက်များ ထပ်မံရိုက်ထည့်စရာ မလိုမဲ့ အသုံးပြုသူအမည်နှင့် စကားဝှက်များကို ထည့်ရန်မေးပါသည်။ ထိုအချက်အလက်များကို အသုံးပြုပုံမှာ –
မှာယူပြီးသား အော်ဒါအချက်အလက်များနှင့် ဖွင့်ထားသည့် အကောင့်ကို ပေးပို့ရန်
ငွေပြန်အမ်းဖို့ သို့မဟုတ် အခြားမေးခွန်းများအတွက် ပြန်လည် တုံ့ပြန်နိုင်ရန်
ငွေပေးချေမှုနှင့် အတုအပအကောင့်များကို စီစစ်နိုင်ရန်
အိုင်စီတီမှာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်
ပရိုမိုးရှင်းများ လက်ခံပါက ပို့ပေးရန်
ဝယ်ယူသူ အကောင့်ဖွင့်ပြီးပါက အိုင်စီတီမှ အမည်၊ လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်နှင့် ဖုန်းနံံပါတ်များကို သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြင့် နောက်တစ်ခေါက်ဝယ်ယူရာတွင် ထပ်မံဖြည့်စရာ မလိုပဲ ပြန်လည်ဖော်ပြပေးသည်။ ကွန်မန့်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် သုံးသပ်ချက်များကို ရေးသားပါကလည်း သိမ်းဆည်းဖော်ပြပေးထားမည်။
အိုင်စီတီ အဖွဲ့သားများထဲမှ ဘယ်သူတွေ သိနိုင်သလဲ
အိုင်စီတီ အဖွဲ့သားများသည် အောက်ပါအချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုခွင့်ရှိသည်။
Members of our team have access to the information you provide us as follows:
အော်ဒါတင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ဘယ်အချိန်က ဝယ်သည်၊ ဘယ်သို့ ဆက်သွယ် ပို့ဆောင်ရမည်အတွက်နှင့်
ဝယ်ယူသူ၏ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည့် အမည်၊ အီးမေးလ်နှင့် ပို့ဆောင်ရမည့် လိပ်စာ။
အိုင်စီတီ အဖွဲ့သားများသည် ဒီအချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ရခြင်းမှာ ဝယ်ယူသူ၏ အော်ဒါကို ပို့ဆောင်ပေးရန်၊ လိုအပ်ပါက ပြန်လဲလှယ်ပေးရန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်သာ ဖြစ်သည်။
ဂူဂဲလ်လို ကုမ္ပဏီမျိုး၊ ပို့ဆောင်မှုပေးသည့် ကုမ္ပဏီမျိုးဖြင့် ဝယ်ယူသူအချက်အလက်များကို မျှဝေရခြင်းမှာ အွန်လိုင်းစတိုး ဝန်ဆောင်မှု ပိုမို ကောင်းမွန်ရန်နှင့် အော်ဒါများကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ပို့ဆောင်နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
We share information with third parties such as Google Inc., and logistics companies who help us provide our orders and store services to you.
အိုင်စီတီသည် 2C2P ဟုအမည်ရသည့် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ဦးဆောင်နေသည့် ငွေပေးချေလက်ခံဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဝယ်ယူသူမှာ ဗီဇာ၊ မာစတာကဒ်နှင့် အမ်ပီယူကဒ်များကို အသုံးပြုသည့်အခါ 2C2P သို့ ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်မှု ရှိမရှိ သိစေရန် အချက်အလက်အချို့ကို ပို့ဆောင်ပေးရပါသည်။ အိုင်စီတီမှ ခရတ်ဒ်ကဒ်၊ အမ်ပီယူကဒ် အကောင့်နံပါတ်များကို လုံးဝ သိမ်းဆည်းထားခြင်း မရှိပါ။ ဝေ့ဖ်ပေး၊ ကေဘီဇတ်ပေး၊ ဝမ်းပေး၊ ဧရာပေး၊ အမ်-ပိုက်ဆံ အစရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိုဘိုင်းလ်ဖြင့်ပေးချေနိုင်သည့် အပ်ပလီကေးရှင်းများကိုလည်း ၎င်းတို့ထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာပြီး အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင် သာမန်ရိုးကျ ငွေပေးချေမှု စနစ်များဖြစ်သည့် ဘဏ်ငွေလွှဲ၊ ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံရှိမှ ငွေပေးစနစ်၊ လာရောက်ယူမှ ငွေပေးစနစ်များကိုလည်း အိုင်စီတီမှ လက်ခံံပါသည်။
We accept payments through 2C2P. When processing payments, some of your data will be passed to 2C2P, including information required to process or support the payment, such as the purchase total and billing information. ICT.com.mm do not keep your Credit Card or MPU Card numbers. We also accept Myanmar mobile payment services like WavePay, KBZPay, OnePay, AYAPay, M-Pitesan. Customer must accept their terms to use for payment to ICT.com.mm. Furthermore, we still take traditional payment methods like bank transfer, cash on delivery and cash on pickup.